barnay – Page2– The Only Way To Go!
leading to be peaceful for my life
Don’t go away… i always following you. you never care me although i care you. stay near to me. every seconds is our lives. you are so fast going everywhere without my wish. when i notice , you were out of here. i attach you so many time. you always running out . whatever you … More Be with me
Leaveacomment Be with me
…………………………….. အကောင်းဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ .. အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ရွေးလုပ်ရပါမယ် ။ သင်ဟာ သင့်ဘဝကို သင် ယခု ဘယ်အခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှိနေ ရောက်နေတဲ့ ဘဝကနေ အကောင်းဆုံးဘဝ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ စိုက်ထုတ်မှုတိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖိုု့လိုတယ် လှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ် .. ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှူ ချက် တစ်ခုချင်း ရှူ ရှိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် …. အကောင်းဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး အခြေအနေကို ဖြစ်အောင် သတိထားပြီး လုပ်ဆောင် ကြိုးပမ်း နိုင်အောင်ကျင့် .. ဒါဆိုရင် သင့်ဘဝဟာ အကောင်းဆုံးဘဝ ဖြစ်လာမှာပါ .. ။ ဘာနေ 28-6-2014
Leaveacomment အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ …
လင်းလက်ခဲ့တဲ့ အလင်းတစက် ပျောက်ကွယ် မသွားခင်ထိတော့ သူဟာ နှလုံးသားတစ်ခုလုံး ပိုင်စိုးတယ်…. ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ တခဏ ဆုံးခန်း မရောက်ခင်ထိတော့ … သူဟာ .. နတ်သမီးတပါးပဲ … နေမဝင်ခင်တခဏ ဇာတ်သိမ်းခန်း မရောက်ခင်တခဏ ငါ့ကမ္ဘာဟာ အသာယာဆုံးပဲ … ။ (…….)
Leaveacomment သူမနှင့်အတူ
…………………. နေ့ရက်တွေနဲ့အတူ လေယူရာ တိမ်းတိမ်းသွားတဲ့ နုပျိုရှင်သန်ခြင်းများ … နေ့ရက်တွေနဲ့အတူ အမာရွတ်တွေ ထပ်ထပ်သွားတဲ့ ခံစားချက် ဒဏ်ရာများ… နေ့ရက်တွေနဲ့အတူ တနေ့တခြား တိုးတိုးလာတဲ့ ဘာသာဗေဒ အသစ်သစ်တွေနဲ့…. စိတ်ကူးများ .. ရွက်လွှင့်ခြင်းများ အသက်မက တန်ဖိုးထားခြင်းများ သံယောဇဉ်တွေ.. ချစ်ခြင်းတရားတွေ မြတ်နိုးခြင်းများ .. နာကျင်ခြင်းများနဲ့ ခံစားချက် အဖုံဖုံတို့တွေသည် … နေ့ရက်အချိန်တို့နဲ့အတူ ဝေလွင့်ပျက်သုဉ်း ကွယ်ပျောက်ခဲ့သည် သာချည်း…။ (2-4-2014)
Leaveacomment သင်္ခါရ
အစေးကပ်နေတဲ့ အတွေးတွေက မြင်မြင်ရာ ပစ်ခွင်းလို့ ခရီးတွေ လျှောက်လိုက်တာ .. လမ်းပျောက်လို့ လမ်းထောက်တဲ့ခါကြမှ ငါ .. လမ်းမှားနေပြီ … တဲ့ ။ ခက်တာပါပဲ … လျှောက်လက်စ ဒီခရီးက အတော်အတန် လမ်းပေါက်ခါမှ အမှောင်အတိ အလင်းမရှိနဲ့ ဘယ်ကို ဆက်လျှောက်ရမယ်မှန်း .. နည်းနည်းမှကို မမြင် … ။ အလင်းရှင် ကယ်တော်မူတဲ့အခါမှ အမှားတွေက ဒင်းကြမ်းလို့ လမ်းတွေက စုတ်ပဲ့နဲ့ ခရီးလမ်းအစကိုပဲ ပြန်တွေးမိတော့တယ် … ငါ … အတွေးမှားလေခြင်း …. ။ ဘာနေ 1st-march-2014
Leaveacomment ငါ .. မှားသလား ..